iPad - iPhone News | Vaovao IPhone
El iPad dia ilay takelaka sa takelaka Namboarin'i Apple, izy io dia ilay fitaovana mpanelanelana misy eo amin'ny Mac sy iPhone. Manana a Efijery multi-mikasika 9,7-inch ary misy modely misy fifandraisana data na modely tsy misy afa-tsy amin'ny WiFi, mifantoka bebe kokoa amin'ny fampiasana ao an-trano. Mizara rafitra miasa amin'ny iPhone izy, na dia ampifanarahana amin'ny efijery lehibe kokoa aza ireo rindranasa. Izy io dia manana fivarotana fampiharana ary afaka mampiasa ny rindranasa rehetra amin'ny iPhone ihany koa. Eto ianao dia afaka mahita ny maro amin'ireo vaovaony, fa raha te hahalala ny vaovao rehetra ianao dia midira ao amin'ny bilaoginay rahavavy Vaovao IPad.
Ity no fanazavana ny antony mahatonga ny Visual Organizer an'ny iPadOS 16 manohana ny chip M1 ihany
ny Angel Gonzalez hace Herinandro 2 .
Matetika i Apple dia mametra ny safidy sasany amin'ny rafitra fiasany vaovao amin'ny fitaovana tranainy. Mizara roa ny fanazavana momba izany...
iPads mifanaraka amin'ny iOS 16
Mbola manjavozavo izahay taorian'ny Keynote. Apple dia nanolotra antsika omaly ny rafitra fiasa vaovao ho an'ny fitaovany rehetra, rafitra fiasa vaovao sasany...
Tonga ny iPadOS 16 feno vaovao nandrasana hatry ny ela
ny alex vincent hace Herinandro 3 .
Tamin'ny taona 2021 dia natomboka ny iPad voalohany misy chip M1. Hatramin'ny nanombohan'io fitaovana io dia maminavina ny fanatsarana ny…
ny Angel Gonzalez hace 2 volana .
iPadOS dia tonga amin'ny maha-rafitra azy manokana ho an'ny iPad taona vitsivitsy lasa izay. Na izany aza, hatramin'izay iOS dia nampifanarahana…
Ahoana ny fomba hijerena ny iPad amin'ny fahitalavitra
ny Ignatius Room hace 2 volana .
Azo antoka fa imbetsaka ianao no nieritreritra ny fomba hijerena ny iPad amin'ny fahitalavitra mba hankafizana ny atiny...
Ny taranaka iPad Pro manaraka dia hitondra ny chip M2 ary havoaka amin'ny fararano
ny Angel Gonzalez hace 3 volana .
Ny hetsika Apple tamin'ny volana martsa lasa teo dia nandao ny iPad Pro. Matetika ny martsa dia…
Ny fitsapana dia nanamafy fa ny iPad Air vaovao dia manana fampisehoana mitovy amin'ny iPad Pro
ny Tony Cortes hace 3 volana .
Ny sasany tsy voahevitra dia nino fa ny processeur M1 izay mametraka ny iPad Air vaovao dia ho "voasarona" mba hanolotra fampisehoana ambany kokoa ...
Azonao atao ny mampifandray iPad amin'ny USB-C amin'ny Studio Display, fa ny modely sasany ihany
ny Tony Cortes hace 4 volana .
Ny zava-baovao lehibe tamin'ny hetsika Apple omaly tolakandro dia tsy isalasalana fa ny Mac Studio sy ny…
Ny iPad Air vaovao, biby amin'ny hafainganam-pandeha ambony indrindra
ny louis padilla hace 4 volana .
Nanavao ny iPad Air i Apple, ary nahatanteraka izay nantenaina. Ny fampidirana ny processeur mahery indrindra…
Ny iPad Air vaovao dia hanana ny processeur M1 avy amin'ny iPad Pro
Latsaky ny 24 ora miala amin'ny hetsika fandefasana Apple isika ary midika izany fa ny tsaho…
Ahoana ny fisafidianana ny iPad tsara indrindra ho an'ny oniversite
ny Jordi Gimenez hace 4 volana .
Anisan’ny fanapahan-kevitra tsy maintsy raisintsika indraindray ary sarotra ny mamaly izany...
Maninona ny iPad no tsy manana kajy?
Ahoana ny fakana pikantsary tsy misy ny bokotra Home and Power